Kooxo hubaysan oo wiil ku toogtay Muqdisho, kadibna muuqaal ka duubay! – War La Helaa Talo La Helaa
Shaaciye.com-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil gelinkii dambe ee maanta Suuqa Bakaaraha gaar ahaan halka loo yaqaano Cabdalla Shideeye ay rag hubeysan ugu geysteen wiil dhalinyaro ah, kadibna ay muuqaal kooban ka duubeen.
Sida dadka goobjoogayaasha ah ayaa waxa ay inoo sheegeen wiilka la dilay in gacanta uu naafo ka ahaa, kaasi oo si weyn looga garanayay Cabdalla Shideeye.
“Walaal mar qura ayaan ka war helnay wiilka oo rasaas ay ku socoto, kadibna Mobile-ka gacanta ayaa looga duubay muuqaal, nimanka dilka geystay Saddex ayay ahaayeen, wayna baxsadeen, mana jirin ciidan ka daba tagay.” Ayuu yiri qof ka mid ah dadka goobjoogayaasha ah.